Blockchain Izindaba 29 Januwari 2018 - Blockchain Izindaba
Januwari 29, 2018 admin
Blockchain Izindaba 29 Januwari 2018
Omunye electronics ezitolo ngobukhulu Japan Yamada Denki manje amukela Bitcoin
Yamada Denki, omunye electronics ezitolo ngobukhulu Japan, umemezele bona wamukela Bitcoin njengoba indlela yokukhokha.
Ziyakwazi ngokubambisana Bitflyer, futhi ukuze bakhumbule ukuthi intuthuko entsha, Bitflyer akunika isipho 500 yen ukuba ngowokuqala 500 amakhasimende ukukhokha nge forex virtual.
Korea umthengisi kanye e-commerce giant WeMakePrice ukwamukela 12 cryptocurrencies
of kePrice, kangcono esaziwa ngokuthi Wemepu, omunye ngobukhulu e-commerce ezisekelweni South Korea kanye Retailers ezinkulu ihlele nokwamukela 12 cryptocurrencies, kuhlanganise Bitcoin, ngokubambisana Bithumb, cryptocurrency exchange ngobukhulu kuleli.
WeMakePrice ingeza cryptocurrencies yesikhulumi yayo izinkokhelo ekhona OneThePay. Uma ukuhlanganiswa kuqedile, abasebenzisi WeMakePrice ekhona bazokwazi ukuthenga izinto kanye nezinsizakalo usebenzisa cryptocurrencies.
Lapho exoxa ne-South Korea bomthombo wezindaba esidayisa HanKyoReh, okhulumela WeMakePrice wawuthi inkampani kufikile ngesinqumo cryptocurrencies zokuhlanganisa njengengxenye uphiko emikhulu ukudambisa inqubo yokukhokha abathengi jikelele.
"…ukwenza izinkokhelo sikuvumela abathengi bethu kanye namakhasimende. Sibheka mobile fintech zokusebenza, amaphuzu, futhi cryptocurrencies njengoba izindlela kahle yokukhokha,"Kusho umkhulumeli.
isitatimende yenkampani esemthethweni okukhulunywa: "Isevisi yokukhokha bitcoin… inkonzo okuthuthukisiwe lula. "
BTCC zitholwa Hong Kong ezisekelwe blockchain utshalomali Isikhwama
Bitcoin yezimayini kanye Ukuhwebelana BTCC nhlanganisela iye atholwe ongashiwongo ngegama Hong Kong ezisekelwe blockchain utshalomali Isikhwama. Izinsiza kuzosiza ukukhokhela BTCC lagcile international njengoba akube kusakhulunywa ngaye emakethe Chinese.
ibhizinisi BTCC liye kwalinciphisa ngumuntu zokulawula ufa-phansi China, okuyinto uvinjelwe cryptocurrency yokuhweba Ukuhwebelana esekelwe kuleli zwe. Beijing manje ine Bitcoin ezimayini isibhamu yayo zokungcebeleka, ngokusho kwemibiko yamuva e-FT nakwezinye izindawo.
Okhulumela BTCC wathi: “Okwamanje kungukuthi idedela ulwazi Isikhwama noma imithombo ephakanyiswe.”
I BTCC exchange adayiswa ezingaphezu kuka $25 Billion Rand zemali 2017. BTCC sika Mobi isikhwama, okuyinto eyenzeka ngo-Mashi 2017, manje ine amakhasimende kusuka 180+ amazwe, Ungeze okhulumela.
Esitatimendeni BTCC wabasunguli Bobby Lee uthe: “yokufuna wanamhlanje kwibanga Amazing ngoba BTCC igunyaza yonke umsebenzi wethu esiwenza kanzima eminyakeni embalwa edlule. Ngijabulile kakhulu imithombo lokhu kunikeza BTCC ukuhambisa ngokushesha futhi bethukuthele sikhule amabhizinisi ethu 2018 nangale.”
Blockchain Izindaba 07.06.2018
Fidelity kungase ukuqalisa ...
Blockchain Izindaba 12.07.2018
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 28 Januwari 2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 30 Januwari 2018